SOCHII GUYYAA MURAASAAN KAN BAATII SADDEETI OLII XIQQEESSUUN GAARIIDHAA?-XIINXALA GABAABAA-Jawar Mohaamadiin – Welcome to bilisummaa
SOCHII GUYYAA MURAASAAN KAN BAATII SADDEETI OLII XIQQEESSUUN GAARIIDHAA?-XIINXALA GABAABAA-Jawar Mohaamadiin
bilisummaa July 16, 2016	Leave a comment
1. Oromoon diina hin ajjeefne kan jedhuuf…maal waan hin lallabiniifi moo? Mootummaanuuu looltoonni meeqa akka jalaa du’an akka amane ni dagattani? Dhugaa jiru yoo barbaaddaan seenaa Bosona Cilliomoo, laga Mogor, Shaallaafi Gaara Mul’ataatti hojjatame qorachuun barbaachisaadha. Shawaa Lixaa naannoo Gaalessaatti dargaggoon qawwee diinarraa hiikkateen humna addaa ( commando) Wayyaaneen bobbaase ji’a lamaa oliif ofirraa ittisee rasaasni harkaa akka dhume beektuu laata? Dubartiin teenya muka mooyyeetin Agaazi mataa dhooftee kilaash hiikkachuun isii hagasumatti irraanfatamee laata? Ummanni keenya qawween bahee ajjeesee geeraruu kan dhiise akka gariin yaadutti qawwee waan dhabeefillee miti. Xiqqaattus takka nyaattee taatus waa numa jiran. Bakka dhabetti ammoo akkuma qabatamaan agartaan dhibbaatamaan hidhattoota mootummaa irraa hiikkachuu akka danda’u mirkaneessee jira. Hoggansi sadarkaan jiru lola qawweetti seenuun tarsiimoo isaa hin turre. Qabsoo keessatti ajjeesuun miira yeroo oowwisuu danda’a, tarsiimoofi qophii itti fufiinsa mirkaneessu qabaachuu baannaan gaaga’ama malee faaydaan isaa muraasa. Ummanni keenya tarsiimoofi jaarmaya waraanaaf qophaayen maletti qawwee qabatee osoo bahee jiraate ji’a saddeet dhiisaa torban sadihiifusadarkaa bal’aa sanitti itti fufee qabsaayuu hin danda’u ture. Injifannoolee gurguddoo argate kanas hin goonfatu ture. Kanaaf ummanni keenya qawwee ammayyaa dhiisaati meeshaalee waraanaa aadaatuu qabatee akka hin baane itti waywaatamaa turuu hin irraanfatinaa! Yoo waraanuu hin henne hin luqqufatiniin makmaaksa Oromooti.
Previous Sab-quunnamtii hawaasummaa akka madda odeeffannootti; muuxannoo ogeesotaa fi dargaggoota Oromoo
Next Xalayaa Banaa Hogganoota ABO, ADO, ABO Tokkoomee fi KWOf